China Kwesịrị jel kpo oku mkpuchi ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Huanyi
Ihe: satin ákwà mejupụtara ịkwanyere mkpuchi
Nha: 47cm n'obosara, 600g
Agba: pink, agba nwere ike ahaziri ma ọ bụrụ na oke karịrị 2000pcs
Ojiji: Mgbe ị sachara ntutu, tinye ude mmiri a nke ọma, yikwasị okpu nwere ike iwepụ, wee kpoo okpu mmiri na ọkara ọkụ na microwave maka minit 2-3. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ihe dị ka ogo 35-45, yikwasị ya ihe dịka 15 nkeji. Adabara perm, post-dai-elekọta elekọta, na-adị kwa ụbọchị ntutu àgwà mmezi.
Ojiji:Mgbe ị sachara ntutu, tinye ude mmiri a nke ọma, yikwasị okpu nwere ike iwepụ, wee kpoo okpu mmiri na ọkara ọkụ na microwave maka minit 2-3. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị ihe dị ka ogo 35-45, yikwasị ya ihe dịka 15 nkeji. Adabara perm, post-dai-elekọta elekọta, na-adị kwa ụbọchị ntutu àgwà mmezi.
1. 10 Afọ Ahụmahụ nke OEM, ODM, ahaziri agba, logo, nchịkọta. Nwere ike ịnye gị ndụmọdụ ndị ọkachamara banyere ojiji na nchekwa, iji zere leakage ma ọ bụ ebu.
2. Factory nwere ihe karịrị 20 Production Lines, UV-ebi akwụkwọ igwe, Silkscreen omumuihe nwere ike izute gị chọrọ na logo, anyị na-omenala ọrụ akpa site onwe anyị nwere ike abịa gị okpu n'ụzọ doro anya.
4.N'ihi na ndị jel kpụ ọkụ n'ọnụ obere size nwere ike uko na-eme ka iru ala, anyị factory nwere dị iche iche ibu nha maka gị họrọ, nwere ike dabara ọzọ ndị mmadụ.
Nke gara aga: Emeputa maka Ice Ukwu maka ọmụmụ - --mụaka ice mkpọ - Huanyi
Osote: Jirinụ kechie ice mkpọ
Ntụ oyi okpu okpu
Miri Okpomọkụ okpu
Isi mkpuchi perm
isi ntutu isi
Kpụ ọkụ Gel Cap
ihi ụra okpu
Kwes okpu okpu